China Magswitch Magnet mveliso kunye nabenzi | Rumotek
Iimagnethi zeMagswitch zenziwe ngemagneti ye-neodymium esisigxina kunye neqokobhe lensimbi. Ingasetyenziswa kuzo zonke iintlobo zezicelo. Apha sine-ON kunye no-OFF switch esenza ukuba umsebenzi ube lula, ziyavakala. Abathengi esibava uninzi lwabo ngabo basebenza ngomthi okanye ngesinyithi.
Iimagnethi zeMagswitch zihlala zisebenza kumzi mveliso weplanga okanye wesinyithi. Abachweli, abenzi bemithi kunye nabenzi befanitshala bafumanela izinto ezininzi abazisebenzisayo. Iimagnethi zinokunceda ukwenza izinto ezenziwayo okanye iijegi zihlangane ngokulula, ngokukhawuleza nangolungelelwaniso ngakumbi. Abasebenza ngomthi bafumana ezi zinto ziluncedo ngendlela emangalisayo.
I-Welders zifumana ezi zixhobo ziluncedo ngokunjalo. Ukubeka ngcono kunye nokuseta kunokwenzeka ngezi magnethi.
Kuyenzeka ukuba usebenze ngokukhawuleza kunokuba kufuneka wakhe into ngamantongomane, iibholiti kunye nentsimbi.
IMagswitch ikwanazo neendonga zentsimbi ezingqindilili kumacala amabini omazibuthe. NgokweSikim, le sekethe yamagneti ijongeka kakhulu njengokuvalwa kwekhabhinethi. Indawo yemagnethi iphuma kwipali enye yemagnethi, iphumela kwiindonga zentsimbi esecaleni, kwaye ngaphandle kwento onamathele kuyo. Emva koko "iyahamba" ibuyela eludongeni lwentsimbi echaseneyo.
Ngotshintsho oluphezulu ungayicima.
Nanku apho kwenzeka khona umlingo. Xa ujikelezisa iqhina, ujikelezisa umazibuthe ophakamileyo onedayimethi ngobukhulu nge-180 °. Ngoku umazibuthe uqukuqela usuka kwimagnethi enye, udonga lwentsimbi ukuya komnye umazibuthe.
Abantu baseMagswitch kufuneka ukuba bazenzile ngokufanelekileyo izibalo zabo, kuba ubume bentsimbi buyilwe kwaye bulinganiswe ngokuchanekileyo ukugcina onke amandla kazibuthe ebaleka ngaphakathi kwindibano. Ayifikeleli ngaphandle kwaphela. Kule ndawo, akukho mandla okutsala aziva.
Egqithileyo I-Rotor yombane kunye neStator
Okulandelayo: Isahluli seGridi enebhokisi